Carte iyo Bayle oo kusoo baxay xubnaha beelaha waqooyi ee Aqalka hoose baarlamaanka Soomaaliya – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Carte iyo Bayle oo kusoo baxay xubnaha beelaha waqooyi ee Aqalka hoose baarlamaanka Soomaaliya
Ra’iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cumar Carte Qaalib iyo wasiirkii hore ee arrimaha dibadda C/raxmaan Ducaale Bayle ayaa maanta kusoo baxay xubnaha beelaha waqooyi ee Somaliland uga mid noqonaya Aqalka hoose ee baarlamaanka soo socda.
Doorashadaasi oo ay kusoo baxeen labadaasi mas’uul ayaa lagu qabtay xarunta gaadiidka booliska ee magaalada Muqdisho, waxayna kala heleen sida soo socoto:-
Maxamed Cumar Carte wuxuu helay 47 cod, wuxuuna ka guuleystay musharaxa kale ee lagu magacaabo Axmed Ismaaciil Xuseen oo isna helay 4 cod.
Mudane Maxamed Cumar Carte oo markii la doortay kadib ka hadlay goobtaasi ayaa uga mahad celiyay ergadii u dooratay xilkaasi, isagoona dhinaca kale ku baaqay in xubnaha kale ee ka harsan Aqalka hoose lagu soo doorto isla goobta ay maanta doorashadu ka dhacday ee xarunta gaadiidka booliska degmada C/casiis ee magaalada Muqdisho.
Dhinaca kale, wasiirkii hore ee arrimaha dibadda dowladda federaalka Soomaaliya C/raxmaan Ducaale Bayle ayaa isagana ku guuleystay kursiga labaad ee xubnaha beelaha waqooyi uga mid noqonayo Aqalka hoose ee baarlamaanka soo socda.
C/raxmaan Ducaale Bayle ayaa helay 48 cod, wuxuuna ka guuleystay musharaxa kale ee lagu magacaabo C/laahi Xaashi Abiib oo isna helay 2 cod.
Dhinaca kale, ergooyinka maanta dooranaysay xubnahaasi ayaa lagu ammaani karaa sida qiirada leh ee ay codadkooda uga dhiibteen doorashadaasi maanta lagu qabtay xarunta gaadiidka booliska degmada C/casiis ee magaalada Muqdisho.
Ammaanka goobta ay ka socoto doorashadaasi ayaa sugaya ciidanka dowladda iyo kuwa howlgalka AMISOM, waxayna ciidankaasi xireen dhamaan wadooyinka soo galay xarunta ay doorashada ka socoto, mana jirin wax gaadiid ah oo maanta maraaya wadooyinka ku yaala hareeraha xarunta gaadiidka booliska ee magaalada Muqdisho.